Manjaro 21.0.1 ikozvino yavapo, ine iyo GNOME 40 uye Mesa 21.0.1 maapplication | Linux Vakapindwa muropa
Manjaro 21.0.1 ikozvino yave kuwanikwa, ine iyo GNOME 40 uye Mesa 21.0.1 maapp
Mangwanani ano, mumapoka akasiyana eManjaro tanga takamirira mapakeji matsva, kunyanya iwo Manjaro 21.0.1 Ornara. Vasvika maawa mashoma apfuura, uye mashoma mashoma apfuura vakavhura tambo pane yako foramu kuzivisa iyo nyowani vhezheni zviri pamutemo. Kunyangwe paine shanduko mune dzayo dzese edhisheni, inokatyamadza yasvika pane iyo inoshandisa iyo GNOME desktop, sezvo vakatovandudza mashandisiro kune ayo eGNOME 40.
GNOME idesktop, zvinoreva kuti kunyorera zvinongova chikamu chayo. Ndeipi nzvimbo yemifananidzo isina kugadziridzwa parizvino GNOME 40, uye chokwadi ndechekuti, kunyangwe Manjaro achigadzirisa mapakeji ayo munguva pfupi, modhi yayo yekuvandudza inozivikanwa seye-Rolling Kuburitswa: kuisirwa uye kugadzirisa kwehupenyu, asi ivo vanochengetedza uye vanodzivirira kuita zvinhu zvekupenga.
Pfungwa dzeManjaro 21.0.1
GNOME 40 kunyorera, asi Shell uye zvinowedzera zvinoramba zviri pa3.38.
Shanduro dzakashandurwa kuenda ku v247.0.
Vakagadzirisa tsanga, asi kune mamwe maup-up-to-date mapoinzi vhezheni, sezvo Linux 5.12 ichiri kuvandudza.
pirewire, WINE uye AMDVLK yakagadziridzwa.
Tafura yakaiswa kune v21.0.1.
Kugadziridzwa kune akawanda mapakeji, senge python uye hashkell.
Semashoko, Plasma 5.21.4 haisati yaonekwa izvozvi, sezvo yakavhurwa Chipiri chapfuura uye Manjaro anowanzo mirira kweinenge vhiki kuti aipe sechigadziriswa. Ivo zvakare havana kugadzirisa iyo XFCE vhezheni.
Manjaro 21.0.1 yatosvika kuvashandisi varipo. Mifananidzo mitsva ndeyekuisa kwekutanga, uye inowanikwa pa Iyi link mune avo epamutemo edhisheni, ayo ari XFCE, GNOME uye KDE. Mumazuva mashoma anotevera ivo vanofanirwa zvakare kugadzirisa zvimwe zveimwe shanduro dzemunharaunda, anova MATE, Anotyisa, Bspwm, Budgie, Cinnamon, i3, LXDE, LXQt, OpenBox editions, uye kunyangwe XFCE-USB iyo isingaoneke pane yepamutemo webhusaiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Manjaro 21.0.1 ikozvino yave kuwanikwa, ine iyo GNOME 40 uye Mesa 21.0.1 maapp
mirage the akadaro
hauna chokwadi kuti vanozovandudza riini shell?
Pindura kune mirage
Mhoroi, mirage. Ini handigone kukuvimbisa, asi Manjaro anotsanangura pane yayo webhusaiti kuti izvo zvinosvika kune Yakagadzika vhezheni, inozviita mavhiki maviri kunze kweiyo Unstable vhezheni. GNOME 40 yakarova Unstable paZuva 2, saka inogona kurova Yakagadzika svondo rinouya. Asi, kubva pane zvavanondiudza, havangazviite kana vawana kukanganisa, ndiko kuti, zvinofanirwa kunge zvakanaka kuti nguva dzakatarwa dzizadzikiswe.
Vakaona kushushikana muLinux eBPF subsystem
Tichava neProton kare muFirefox 89 kana kuti Mozilla yakamirira Firefox 90?